Mogadishu Journal » Askari ay ciidamada Booliska ku dileen magaalada Muqdisho
Mjournal :-Askari ayaa lagu diley milkiile mooto bajaajlena waa lagu dhaawacay kadib markii rasaas ay ku fureen ciidamo Boolis ah oo ku sugnaa isgoyska Cali Kamiin ee magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in muran soo kala dhexgalay ciidamo ku sugnaa goobta uu dilka ka dhacay.
Askari la sheegay in uu xiligaas waday mooto, uu doonaayaay in aan laga qaadin lacago, balse ciidanka halkaasi ku sugnaa ay ka qaadaan mootooyinka isticmaala wadadaasi, sidaas lagu toogtay askarigii halka sidoo kalana uu dhaawacmay milkiilihii bajaajta.
Ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliya ayaa gaaray goobta uu dilka ka dhacay waxaana halkaasi ka qaadeen maydka.
Askariga ka tirsan ciidanka dowlada ee lagu toogtay Cali Kamiin, iyaga oo halkaasi ka bilaabay baaritaano la xariira sida wax u dhaceen.
Hase yeeshee falkan ayaa ah mid ku cusub dilalkii hore uga dhici jirey Muqdisho,waxayna hore ciidamada dowlada ugu dileen caasimada dalka tiro badan oo ah wadayaasha mooto bajaajyada.